Orinasa Madarail-MIKOROSY FAHANA TANTERAKA -
AccueilRaharaham-pirenenaOrinasa Madarail-MIKOROSY FAHANA TANTERAKA
Tsy hay intsony izay manjo ny orinasa Madarail ankehitriny. Fantatra mantsy, araka ny fanadihadiana natao, fa mikorosy fahana tanteraka ity orinasa misahana ny fitaterana an-dalamby ity amin’izao fotoana izao. Tsy misy vola miditra mihitsy noho ny tsy fahazoany lalam-barotra eo amin’ny fitaterana an-dalamby.
Raha ny tsilian-tsofina mantsy, tsy misy na dia kaontenera iray aza hita sy mba taterin’ity orinasa ity amin’izao fotoana izao, izay efa nisy fotoana naharitra ihany, mitoby ao amin’ny trano fitehirizana ireny entana ireny. Zara raha mahazo lalam-barotra amin’ireny kaompanian-tsolika ireny sisa ity orinasa ity ankehitriny.
Nandeha ihany ny orinasa Madarail ary nisy fanatsarana mihitsy teo aloha teo saingy, vantany vao nitsidika ny fitondrana Tetezamita ka nahafahan’ny mpandraharaha iray nametraka petra-bola vaventy (70%) tamin’io orinasa io. Tamin’izany indrindra no nahalalana fa tsy refesi-mandidy io mpandraharaha manana petra-bola vaventy ao amin’ny orinasa Madarail io.
Tsy refesi-mandidy satria manana petra-bola vaventy tamin’ny orinasa. Izany hoe, ny 30%-n’ny petra-bola ihany ny an’ny fanjakana amin’ny Madarail.
Tetika ambadika mihitsy anefa no nidiran’ity mpandraharaha ity tamin’izany sy nahafahany nandresy lahatra ny fitondrana tamin’ny nahafahany nampiasa sy nametraka ny vola, izay manana ampahany betsaka, tamin’io. Taty aoriana anefa, nivoaka ihany ny resaka mahakasika izany satria nataony nitaterana ireo hazo sarobidy, “andramena” ny fitaterana an-dalamby. Manamafy izany ny namefeny ny kianjan’i Malacam Antanimena, ka nahatonga ny korontana teo aminy sy ireo mpivarotra manodidina iny faritra iny. Saika nanaovany sy nanafenany ireo “andramena” tao amin’io toerana io.
Tsy tanteraka anefa ny nofinofin’ity mpandraharaha manana petra-bola vaventy ao amin’ny Madarail ity. Izay indrindra no anisan’ny nampikorosy fahana ny orinasa ankehitriny. Voalaza mantsy tany am-boalohany tamin’ny fifanarahana fa hitondra fanatsarana ny orinasa no nidiran’ity mpandrahara ity tao. Ny nifanohitra tamin’izay anefa ny zava-nitranga fa saika hoentina amina raharaha maloto ny fitaterana an-dalamby malagasy. Noho izany, tsy afa-miala fa tompon’andraikitra amin’ny fitontongan’ny orinasa Madarail ity mpandraharaha malagasy iray ity.